ဗြိတိန်တရားရုံးချုပ်ထပ် Anti-suite မိန့်စဉ်းစား
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက် / ဗြိတိန်တရားရုံးချုပ်ထပ် Anti-suite မိန့်စဉ်းစား
AES Ust-Kamenogorsk ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ LLP v Ust-Kamenogorsk ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ JSC  UKSC 35
တစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာ AES Ust-Kamenogorsk ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ LLP v Ust-Kamenogorsk ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ JSC  UKSC 35, နှိမ့်ချအပေါ်ပေးအပ် 12 ဇွန်လ 2013, တရားရုံးချုပ်အင်္ဂလိပ်တရားရုံးများအနေနဲ့ခုံသမာဓိသဘောတူညီချက်ဖောက်ဖျက်ယူဆောင်နိုင်ငံခြားတရားစွဲဆိုမှုများဆက်လက်သို့မဟုတ်တင်သည့်ကိုရည်မှတ်ကာတရားရုံးမိန့်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှိမရှိစဉ်းစား, ပင်တစ်ဦးအမှန်တကယ်မရှိခြင်းအတွက်, အဆိုပြုထားသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ခုံသမာဓိ.
AES Ust-Kamenogorsk ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ LLP ("သင်္ကေတပြ") တစ်ဦး၏ရရှိထားသောနှင့် lessee ခဲ့သည် 25 ရက်စွဲပါသဘောတူညီချက်အားဖြင့်ခွင့်ပြုခဲ့တစ်နှစ်လိုက်လျော 23 ဇူလိုင်လ 1997 Ust-Kamenogorsk ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ JSC နှင့်အတူသို့ ဝင်. ("JSC") ကာဇက်စတန်အတွက်ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံထုတ်လုပ်ထားတဲ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့က entitling. အဆိုပါလိုက်လျောသဘောတူညီမှုတစ်စုံတစ်ရာအငြင်းပွားမှုများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်လန်ဒန်မြို့ရှိခုံသမာဓိများအတွက်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ခုံသမာဓိအပိုဒ်ပါဝင်သည်.
တွင် 2009, ယင်းပါတီများအကြားအောက်ပါအငြင်းပွားမှုများ, JSC သည့်ကာဇက်စတန်တရားရုံးများတွင် AESUK ဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမှုယူဆောင်. AESUK နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါခုံသမာဓိအပိုဒ်သည့်ကာဇက်စတန်တရားရုံးရှေ့တော်၌ထိုတရားစွဲဆိုမှုများလိုက်စားခြင်းမှ JSC သိမ်းထားသောအသိပေးစာကြားဖြတ်အစိုးရ Anti-ဝတ်စုံကိုတရားရုံးမိန့်မပါဘဲခိုင်လုံသောနှင့်အတည်ပြုခြင်းနှင့်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်တဲ့ကြေငြာဟုဆိုကာအင်္ဂလိပ်ဘာသာကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တရားရုံးမရောက်မီတရားစွဲဆိုမှုထုတ်ပေး.
AESUK စတင်မ, နှင့်မျှမရည်ရွယ်ခဲ့သို့မဟုတ်စတငျရန်ဆန္ဒရှိ, မည်သည့်ခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှု. ၎င်း၏အနေအထားကို JSC ကိုလိုက်ဒါမှမဟုတ်ဆန့်ကျင်တရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုမှုလိုက်စားအခမဲ့မဖြစ်သင့်ကြောင်းခဲ့တယ် - ကခုံသမာဓိ procedings ဆောင်ကြဉ်းသင့်တယ်, AESUK သူတို့အားတရားစွဲဆိုမှုခုခံကာကွယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.
အမိန့်ဖြင့်ရက်စွဲပါ 16 ဧပြီလ 2010, Burton J ကို, အဆိုပါတရားရုံးချုပ်၌ထိုင်, AESUK အတူတကွ JSC ဖြင့်ဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမှုများဆောင်ကြဉ်းပေးဖို့စပ်လျဉ်းကာတရားရုံးမိန့်နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောကြေငြာခွင့်ပြု (https://bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2010/772.html). အမိန့်ဖြင့်ရက်စွဲပါ 1 ဇူလိုင်လ 2011, အယူခံတရားရုံး Burton J ရဲ့အမိန့်ဆန့်ကျင် JSC ရဲ့အယူခံကိုပယ်ချ (https://bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/647.html).
အဆိုပါတရားရုံးချုပ်တညီတညွတ်တည်းအယူခံပယ်ချ, ကိုင်ပြီး အင်ျဂလိတရားရုံးများအနေနဲ့ခုံသမာဓိသဘောတူညီချက်ချိုးဖောက်ယူဆောင်နိုင်ငံခြားတရားစွဲဆိုမှုထိန်းချုပ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တည်မှုနှင့်ကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ကွောငျး, အဘယ်သူမျှမခုံသမာဓိဖြစ်တည်မှုသို့မဟုတ်စဉျးစားဆငျခွ၌ရှိ၏ပင်ရှိရာ, နိုင်ငံခြားတရားစွဲဆိုမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်အောက်ပါဘရပ်ဆဲလ် / Lugano ညီလာခံများ၏နယ်ပယ်အတွင်းမပေး အနောက်ရေနံတင်သင်္ဘော Allianz SpA v Inc မှ (ယခင်က RAS Riunione Adriatica di Sicurta SpA) (အဆိုပါတပ်ဦး Comor) (အမှု 185/07)  1 AC အ 1138. ဘာမျှမပုအနုညာတစီရင်အက်ဥပဒေ၌ရှိ၏ 1996 တရားရုံးကနေဒီအာဏာကိုဖယ်ရှားရာ.
တရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးကမ်းခြင်း၌, သခင်ဘုရားသည် Mance ညွှန်ပြ:
•တစ်ခုံသမာဓိသဘောတူညီချက်နှစ်ဖက်စလုံးဖော်ပြသို့မဟုတ် impliedly အဆိုပါခုံသမာဓိသဘောတူညီချက်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖိုရမ်ထက်အခြားမည်သည့်ဖိုရမ်အတွက်တရားစွဲဆိုမှု့မှရှောင်ကြဉ်ဖို့ကတိပေးမထွက်ရတစ်ဦး '' အနုတ်လက္ခဏာတာဝန် 'ဖို့မြင့်တက်ပေးသည်. အခြားဖိုရမ်အတွက်တရားစွဲဆိုမှုစတငျဖို့မဒါကအနုတ်လက္ခဏာဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောဖိုရမ်အပေါ်အပြုသဘောသဘောတူညီချက်အတိုင်းအရေးကြီးပါတယ်.
•အအနုညာတစီရင်အက်ဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များသည် 1996 တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို၏ပြဌာန်းခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီးပြည့်စုံသောမ, ခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုခြေလျင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်စဉျးစားဆငျခွရှိကြ၏ဘယ်မှာသာလျှောက်ထား.
•အ, အဆိုပါအနုညာတစီရင်အက်ဥပဒေ 1996 တရားရုံး section အောက်တွင်မိန့်ကယ်ဆယ်ရေးအမိန့်ဖြစ်နိုင်သည်ရှိမရှိမ bearing ခဲ့ 37 အဆိုပါအကြီးတန်းတရားရုံးများအက်ဥပဒေ 1981 အဘယ်သူမျှမခုံသမာဓိခြေလျင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်စဉျးစားဆငျခွ၌တည်ရှိ၏ဘယ်မှာ.
•ပုဒ်မပေးအဆိုပါယေဘုယျပါဝါ 37 အဆိုပါအကြီးတန်းတရားရုံးများအက်ဥပဒေ 1981 မျိုးကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်သည်နဲ့, အထူးသဖြင့်, မှုအစီအစဉ်အဘို့အပတ်သတ်ပြီးနှင့်အနုညာတစီရင်အက်ဥပဒေအသုံးအနှုန်းများနှင့်အတူ 1996 မည်သည့်ခုံသမာဓိခြေလျင်ဖြစ်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်အဆိုပြုထားသည့်အခါ.
•ဒါကြောင့် section အောက်တွင်လည်းတရားရုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် 37 အဆိုပါအကြီးတန်းတရားရုံးများအက်ဥပဒေ 1981, ဒါကြောင့်မထိုက်မတန်ထင်လျှင်, ကြားဖြတ်အခြေခံပေါ်မှာမဆိုတရားရုံးမိန့်ပေးရန်, လက်ရှိသို့မဟုတ်အဆိုပြုထားခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုများ၏ရလဒ်ကိုဆိုင်းငံ့, အစားတစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းအခြေခံထက်.
ထို့ကြောင့်, အီးယူပြင်ပနိုင်ငံခြားတရားစွဲဆိုမှုရည်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာ Anti-ဝတ်စုံကိုမိန့်ခွင့်ရှိနေဆဲ, အဘယ်သူမျှမခုံသမာဓိစတင်ခဲ့ပြီးအချိန်မှာတောင်.
အီးယူသူ့ဟာသူအတွင်းမှာပဲ, အဖြစ်အများအပြားမှမှတ်မိလိမ့်မယ် အနောက်ရေနံတင်သင်္ဘော ဆုံးဖြတ်ချက်, Anti-ဝတ်စုံကိုမိန့်ဝေးလျော့နည်းဖွယ်ရှိကြောင့်အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ် အနောက်ရေနံတင်သင်္ဘော ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်ဥပဒေသိပ္ပံ. ဘို့ တစ်ဦးအမြန်ပြန်လည်စုစည်းမှုလိုအပ်နေသူများ, အနောက်ရေနံတင်သင်္ဘော တစ်ဦးစင်းလုံးငှားရေယာဉ်အကြားစစ္စလီကျွန်းတစ်တိုက်မှုနှင့် Chartered ပိုင်ဆိပ်ခံတံတားမှထ. အင်္ဂလန်မှာခုံသမာဓိရည်ညွှန်းခံရဖို့အငြင်းပွားမှုများသည်အဆိုပါ charterparty, ဒါပေမယ့် Chartered တစ်အဘိဓါန် Sicilian- တရားရုံးတွင်သင်္ဘောရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမှုစတင်. အဆိုပါ ECJ အင်္ဂလိပ်တရားရုံးအင်္ဂလိပ်ခုံသမာဓိ၏မျက်နှာသာအတွက်ဘာသာစကား Sicilian တရားစွဲဆိုမှုထိန်းချုပ်မှ anti-ဝတ်စုံကိုမိန့်ပေးသနားနိုင်ဘူးကြောင်းအုပ်ချုပ်, ဤတိုင်းအထွေထွေမူအရဆန့်ကျင်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ် အမေရိကန် အငြင်းပွားမှု၏ seised တရားရုံးကရှေ့တော်၌ထိုအငြင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းရန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ရှိမရှိကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်ရန်ရမယ်; ထိုသို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ '' တရားရုံးအကြားအကြွေးဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူကိုက်ညီမှုပါလိမ့်မယ်.
– ဝီလျံ Kirtley, Lazareff သည် Le ဘား
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သဘောတူညီချက်, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, ဘယ်လာရုစ်အနုညာတစီရင်, ဘယ်လ်ဂျီယံအနုညာတစီရင်, အိုက်စလန်အနုညာတစီရင်, ခွင့်အာဏာ, ကာဇက်စတန်အနုညာတစီရင်, လန်ဒန်အနုညာတစီရင်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအနုညာတစီရင်, ဝီလျံ Kirtley